> Resource> Naghachi> Olee naghachi Data si ghara ịdị irè Disk
Enwere m ike weghachite Data si ghara ịdị irè Disk?
M wee na diski ike si a gbajiri akwụkwọ nke m. Mgbe ahụ, m na-agbalị jikọọ ya ọzọ na kọmputa. Ya kwesŽrŽ na-arụ ọrụ ezi. Ma kọmputa gwara m na diski ike bụ "Dynamic & ghara ịdị irè." Ugbu a, m na-enweghị ike imeghe ya. Amaghị m ihe mere, ma m mkpa n'ezie faịlụ na na disk azụ. Dị ụzọ ọ bụla na m nwere ike ime otú ahụ? Biko nyere m aka.
Nke mbụ niile, nsogbu a bụ a nkịtị nke mgbe ị chọrọ jikọọ mpụga ike mbanye na a na kọmputa. Nke a apụtaghị na gị na mpụga ike mbanye gbajiri. Ọ na-eme n'ihi "MBR njehie" ma ọ bụ ndị ọzọ na usoro njehie.
The ozi ọma bụ na ị ka nwere ike naghachi gị data na ihe ghara ịdị irè disk data mgbake usoro dị ka Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac. A mmemme na-enye aka na-agbake fọrọ nke nta niile faịlụ na ụdị si gị ghara ịdị irè disk, dị ka photos, ọdịyo faịlụ, videos, akwụkwọ na ndị ọzọ. Na ya, ị dị nnọọ mkpa iṅomi gị ghara ịdị irè disk wee họrọ faịlụ na ị chọrọ iji naghachi.
Download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Naghachi iji weghachite data si ghara ịdị irè disk ugbu a.
Igosi ghara ịdị irè Disk Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Ndị na-esonụ ndu dabeere na Windows version nke Wondershare Data Recovery. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac njirimara, i nwere ike hazie mgbake na Mac version na yiri nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite
Mgbe launching usoro ihe omume na kọmputa gị, ị ga-enweta ndị na-esonụ mgbake ụdịdị na ya mmalite window: "Echefuola File Naghachi", "nkebi Iweghachite" na "Raw File Iweghachite".
Ebe a na-agbake data si ghara ịdị irè disk, ka họrọ "nkebi Iweghachite" ụdịdị mbụ.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị ghara ịdị irè disk ịchọ furu efu data
Ugbu a mkpa ka ị họrọ gị mpụga ike mbanye na pịa "Next" button ịnọgide.
Ebe a niile partitions na gị ghara ịdị irè disk ga-gosiri na window. Biko họrọ onye na ị na-aga na-agbake data site na pịa "Malite" ka iṅomi maka furu efu faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data si ghara ịdị irè disk
Niile hụrụ ọdịnaya na gị ghara ịdị irè disk ga-egosipụta na window. Ị nwere ike ele faịlụ aha bụrụ na ị chọrọ ego otú ọtụtụ nke faịlụ na gị ghara ịdị irè disk nwere ike gbakee.
Na njedebe, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ na ị chọrọ na pịa "Naghachi" zọpụta ha na partitions na kọmputa gị.